TELMA SUPERCOUPE : Norombahan’ny Cnaps sport Itasy tao Vontovorona ny amboara
Nandritra ny lalao mandroso notanterahina tany Mahajanga, nisaraka ady sahala samy tsy nisy nitoko ny Cnaps sport Itasy sy ny Fosa junior Boeny. 23 janvier 2018
Ny sabotsy teo no nanatanterahana tetsy amin’ny kianjan’ny Cnaps Vontovorona ny lalao miverina. Tanteraka ny nofinofin’ny Cnaps. Niondrika teo anatrehan’ity farany tamin’ny isa 1 sy 0 ny Fosa Juniors na dia azo lazaina ho nanindry teo amin’ny fizaràm-potoana voalohany aza ny ekipan’i Boeny.
Rehefa tsy nahitam-bokany izany dia nampidirin’i Lucien lohalaharan’i Cnaps tamin’ny lohany ny baolina, teo amin’ny minitra faha-37 fizaràm-potoana voalohany. Niezaka namaly izany ry Dax sy namany tamin’ny fidirana faharoa saingy tsy nisy mihitsy ny vintana namonoana baolina. Araka izany dia nanao pao-droa ny ekipan’ny Cnaps avy any Itasy. Satria sady nadrombaka ny amboaran’i Madagasikara no nibata ny Telma super coupe ity ekipa ity. Nahazo ny roa tapitrisa ariary avy amin’ny orinasa Telma. Mbola i Rija sy i Ando mpilalao avy amin’ny Cnaps ihany koa no voasafidy ho mpilalao sy mpiandry tsato-by mendrika indrindra.
Samy mendrika avokoa na ny Cnaps Sport Itasy na ny Fosa Junior Boeny. Tsy nifarana hatreo akory ny lalaon’ny roa tonta fa izy ireo no ekipa hisolo tena ny firenena malagasy amin’ny fifaninanana Afrikanina. Ny Fosa junior izay tompon’ny amboaran’i Madagasikara farany teo dia hiatrika ny fiadiana ny amboaran’ny Caf raha ny” ligue de champion” no andraisan’ny Cnaps sport Itasy anjara. Na dia nanao ny nataony aza ny orana dia tsy nahasakana ny mpankafy tsy ho tonga teny Vontovorona izany. Ireto farany izay nitsodrano ireto ekipa malagasy sangany hiaro ny voninahi-pirenena any ivelany afaka iray volana.